Senator Franken | OromianEconomist
Sanatariin Ameerikaa Oromoof dubbatan; Ambaasaaddiriin Itoophiyaa dhiigaan Oromoo immoo warra Oromoo miidhuuf dhaabbatan. Senator Franken headed to Ethiopia to discuss plight of the Oromos and Somali refugees August 22, 2015
Tags: #OromoProtests, 'BECAUSE I AM OROMO’: SWEEPING REPRESSION IN THE OROMIA, Human rights, Ogaden, Oromia, Senator Franken
Senator Franken headed to Ethiopia to discuss plight of the Oromos and Somali refugees
(Oromedia, 22 Hagayya 2015) Senatariin Ameerikaa, Al Franken, gara Itoophiyaa deemuuf jiran; imala isaanii keessatti dhimma dhiitinsa mirga namoomaa Oromoo fi Somaalee irratti aangota Itoophiyaa waliin dubbachuuf karoora qaban.
Gabaasa isaa guutuuf: Oromo TV